DHEGEYSO-Darawiil gaadiidkoodii ku xaniban yahay Xarfo oo cabanaya. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Darawiil gaadiidkoodii ku xaniban yahay Xarfo oo cabanaya.
Diseembar 31, 2016 3:38 b 0
Xarfo, Dec 31 2016-Darawaliinta isaga gooshata Gobolada Dalka Gaar ahaan Gaadidka Xamuulka ayaa Waxa ay kacabanayan Canshur kordhin lagu Samaeeyay Alaabta saaran Gaadiidka ay Wadaha kayihiin oo Horay loogu soo can shuuray Dekeda Bosaaso.
Gawaaridan oo sida Bagaashka noocyadiisa kala Duwan oo gaaraya kudhawaad 30 Gaari ayaa kuxaniban Duleedka Dagmada Xarfo ee Gobolka Mudug, Hadaba Qaar kamid aha Darawalada ayaa lasoo xiriiray Radio Daljir Wariye Xasan Heykal ayay uwarameen.
DHEGEYSO-Qorshe howleedka saddexda sano ee xukuumadda Puntland oo laga shiray.